​​Baankiin Zamzam Fulbaana dhufu hojii kan jalqabu tahuun ifoome. - NuuralHudaa
​​Baankiin Zamzam Fulbaana dhufu hojii kan jalqabu tahuun ifoome.
On Aug 1, 2019 7
Baankiin Zamzam Sirni Faayinaansii Dhala irraa walaba ta’e, biyyaattiitti akka hundeeffamu adda durummaan sochii kan jalqabe tahuun ifa. Baankichi hayyama Baankii Biyyooleessa Ityoophiyaa irraa xumuree gurgurtaa Aksiyoona irra jira.
Baankichi hojjiitti seenuuf kaapitaala isa barbaachisu walitti qabataa kan jiru tahuufi hanga ammaatti kaapitaala hojiitti seenuuf na-barbaachisa jedhe karoorfate irraa 70℅ argachuu ibse.
Fulbaana dhufu 2012 akkuma adda durummaan baankii Islaamaa biyyaatti keessatti hundeessuuf sochii jalqabe, adda durummaan hojii kan jalqabu tahuu ifoomse.
Baankiin Zamzam waggaa 7 dura tajaajila Faayinaansii dhala irraa walaba ta’e biyyaattiitti jalqabuuf sochii jalqabee ture. Haa tahu malee sababaa dhiibbaa mootummaan irratti godhamaa ture hordofuun hojiitti osoo hin seenin hafe.
May 19, 2022 sa;aa 5:20 pm Update tahe